Rekha Pant's Articles on Martech Zone |
Imibhalo nge I-Rekha Pant
URekha Pant, uchwepheshe we-IT, B.Tech waseRGPV University, eBhopal, eNdiya. Ngokubambisana nomsebenzi wakhe we-IT, naye uziphendulele ekubeni ngumbhali oshelelayo ohlanganisa izihloko ezahlukahlukene ku-Digital Communication, Education, Marketing kanye ne-IT. Ngethalente lakhe elingandile, ushicilele izingcezu ze-ace blog njengesivakashi kumawebhusayithi amaningi.
Amaqhinga we-10 Social Media Akhulisa Amasheya Nokuguqulwa
NgoLwesihlanu, ngoJuni 11, i-2021 NgoLwesithathu, Okthoba 13, 2021 I-Rekha Pant
Ngokuphikisana nenkolelo evamile, ukumaketha imidiya yezokuxhumana kungaphezu kokuhambisana nokuthunyelwe kwakho ku-intanethi. Kufanele uze nokuqukethwe okunobuciko futhi okunethonya - okuthile okuzokwenza abantu bafune ukuthatha isinyathelo. Kungaba lula njengomuntu owabelana ngokuthunyelwe kwakho noma aqale ukuguqulwa. Ukuthandwa okumbalwa namazwana akwanele. Impela, inhloso wukuthola igciwane kodwa okufanele kwenziwe ukufeza
Izindlela Ezinhlanu Zesiqiniseko Sokukhuthaza Ukuguqulwa Kwakho Komphakathi
NgoLwesine, Agasti 2, 2018 NgoLwesine, Agasti 2, 2018 I-Rekha Pant
Akunakuphikwa ukuthi indlela ephumelela kunazo zonke yokufinyelela nokwakha ukuxhumana okungokomzwelo nabangaba amaklayenti ngokusebenzisa imithombo yezokuxhumana. Umuntu angathola izigidigidi zabasebenzisi ezinkundleni zokuxhumana ezahlukahlukene; kungaba yimfucuza enkulu ukungasebenzisi leli thuba elihle kangaka. Kulezi zinsuku kumayelana nokufuna ukubonwa, ukuzwiwa, nokuzizwa, yingakho cishe wonke umuntu eya kuma-akhawunti akhe ukuveza imicabango yakhe